Best Music Bots for Discord - VidaBytes | LifeBytes
Iris Gamen | 11/06/2022 20:00 | Zvirongwa
Kana iwe wakanyudzwa munyika yeDiscord, uye iwe unonzwa kuti nzvimbo dzayo dzekutaura dzave kufinha, iyi positi ichakufarira kubva isu tichazotaura nezve akanakisa mimhanzi bots yeDiscord. Vese vashandisi veiyi server vanotsvaga kupa chiteshi chavo chitarisiko chakasiyana, uye ingori nyaya yekuziva kuti ndezvipi zvakanakisa zviwanikwa pazviri.
Iyi chikuva, inokupa iwe mukana wekukwanisa kugadzira nzvimbo yekuda kwako, kuwedzera zvinhu zvakasiyana-siyana zvinoita kuti ive yega. Iwe unogona kugadzira chiteshi, maseva uye kunyange kuvandudza yako bots zvinoenderana nezvaunofarira.
Discord, yave imwe yeakakosha epamhepo meseji mapuratifomu. Kune akasiyana mabhoti ekuwedzera papuratifomu iyi, inogona kubva kune yakanangana nekuenzanisa chats, kune avo vane basa guru rekuvaraidza, semimhanzi bots. Kwete chete isu tinokuunzira iwe kuunganidzwa kweakanakisa mimhanzi bots, asi kune avo vasingazive Discord isu tichataurawo nezvazvo.
1 Discord; chii uye kuti ine mabasa api
2 Chii chinonzi bots paDiscord?
3 Best Music Bots for Discord
Discord; chii uye kuti ine mabasa api
Chokwadi kana iwe uine hukama nenyika yevatambi, iwe unozoziva iyi chikuva zvakakwana. Sezvo, ine basa rekuronga, kusangana nevanhu vatsva uye kutaurirana neshamwari dzako. Ndezve Chat app yakafanana nemamwe mapuratifomu ane basa rimwechete.
Muchidimbu, yakanangwa kune vashandisi mukati meiyo nyika yemitambo, kwavanogona kusangana, kuronga nzira yavo yekutamba nekutaura vachitamba mutambo. Haisi kungoshandiswa nevatambi chete, asiwo nemamwe makambani ane vashandi vakawanda.
Kukwanisa kutaurirana kuburikidza nechishandiso ichi inzira yakapusa, pamusoro pekukupa akasiyana ekutsvaga mabasa ekutsvaga munhu chaiye uye nekudaro unokwanisa kuvawedzera kune yako yekuonana runyorwa. chikuva ichi Inogona kutsanangurwa mumashoko maviri, sangano uye kutaurirana.
Sezvatareva, mazhinji emaseva ari papuratifomu ino ane hukama nenyika yemavhidhiyogames, asiwo unogona kuwana maseva akasiyana panokurukurwa dzimwe nyaya senge anime, hupfumi, hutano hwepfungwa, kana kungosangana nevanhu vatsva uye kuita shamwari nyowani.
Kusawirirana, inomira kunze kwevamwe nekuda kwemhando dzakasiyana dzechat sarudzo. Zvakare, hazvinonotse mutambo paunenge uri online uchitaura neshamwari dzako kana vaunoshanda navo. Nekuda kwekugadzirwa kwemabasa mukati mesevha, unogona kubata nekuenzanisa zvinoitika paseva kana musiki mukuru asipo.
Chii chinonzi bots paDiscord?
Iwo bots paDiscord, mapurogiramu ane basa rekuita basa rega. Aya mabasa anogona kubva pakutamba mimhanzi kuenda kune nyore kusangana pakati pevashandisi veseva.
Zvichienderana nezvaunoda kuzadzisa, unofanirwa kuisa chaiyo bot. Zvirongwa zvidiki izvi Vanozokubatsira kuti uzvisunungure kubva kune iwo mabasa anonyanya kunetesa. Dzinofanirwa kugadzirwa kuitira kuti panguva yekushanda kwavo dziende nemazvo.
Kubva pano, tinokupa zano kuti uite usawedzera bots pasina chero kutonga, zviri nani kuti utore nguva yekutsvaga iyo inonyatsoenderana nezvido zvako. Nekuita sarudzo iyi, iwe unodzivirira matambudziko uye zvinogoneka kuvhiringidzika pakati pevashandisi.
Iyi mhando ye bot yakakosha kune chero Discord server. Navo, iwe uchakwanisa kuridza mimhanzi inonzwika nenhengo dzese dzeseva, uchingomutsa mimwe mirairo.
Nenhamba yakawanda yebhoti pamusika nokuda kwechinangwa ichi, hazvisi nyore kuwana kuti ndeupi uchapa zvibereko zvakanakisisa. Naizvozvo, mune ino post tinokupa iwe yakadzama gwara kune mamwe ezvakanakisa.
Imwe yei yakanyanya kukwana uye yakakurumbira mimhanzi yekutamba bots pakati pevashandisi veDiscord. Ichakubvumidza iwe kuridza mimhanzi kubva kwakasiyana mapuratifomu akadai seYouTube, Vimeo, SoundCould, nezvimwewo, inogara iine yakanakisa odhiyo mhando uye yemahara zvachose.
Zvakare inokupa iwe kugona kugadzira yakajairwa playlists. Wedzera, iyo inoenderana nekutepfenyura mimhanzi mapuratifomu akadai Twitch.
Imwe mimhanzi ine simba kwazvo bot, ine makuru akasiyana emabasa. Nekuburikidza nepaneru yekudzora iwe unozokwanisa kugadzirisa akasiyana akabatiswa mabasa kana mirairo yaunoda kugadzirisa. Pamusoro pezvo, ine mabasa ekukwanisa kuenzanisa, mbeveve kana kurambidza kwenguva pfupi vashandisi vanotyora chero mutemo.
Yemahara mimhanzi bot yeDiscord. Zvinosanganisira mabasa akafanana chaizvo nemamwe mapurogiramu madiki akadai mukana wekuridza nziyo kubva kune mamwe mapuratifomu seYouTube, Twitch, Mixer, Bandcamp uye nhamba huru yevatepfenyuro.
Nezvayo zvekutamba, unogona kusvetukira kune inotevera rwiyo, loop, fambisa, bvisa kubva pamutsetse, nezvimwe. Uyezve, Chip ine sarudzo yekukuratidza mazwi enziyo dzakasarudzwa.
Chinangwa chikuru cheiyi bot yeDiscord ndecheku gadzirisa zvese zvine chekuita nemwero, varaidzo uye mimhanzi. Imwe yemapoinzi ayo akanaka ndeyekuti iri muchiSpanish, izvo zvinoita kuti kubata kwayo kuve kutakurika kune vashandisi.
Ayana ibhoti, inogoneka zvizere kune izvo zvinodiwa nemushandisi wega wega. Kuburikidza neautomatisms, iwe unozogona kuenzanisa zvirimo zvesevha. Iyo ine sevha yemimhanzi kuburikidza nemirairo uye playlist kwaunogona kuwedzera nziyo dzaunofarira, kukwanisa kuita kune nziyo dzinoridzwa nevamwe vashandisi.
Yakanyanya kufarirwa nevaya vanotsvaga a moderation bot, asi nekuwedzera, inogona zvakare kuridza mimhanzi. Ongorora otomatiki chats pamaseva kudzivirira maitiro anopesana nemirairo. Kuburikidza nenhevedzano yemirairo, vashandisi vanotadza vanogona kunyaradzwa kana kudzingwa.
Inoenderana nemamwe mimhanzi mapuratifomu seYouTube, Twitch kana SoundCloud. Wedzera, iyo MEE6 inosanganisira inonakidza mimhanzi mutambo kuti unakirwe newako seva shamwari, kwauchazofanirwa kufungidzira rwiyo uye muimbi ari kutamba.
Pakupedzisira, tinokuunzirai iyi itsva mimhanzi bot iyo inobvumidza iwe kuti uteerere mimhanzi neako maseva ekubatika. Ino gadzirisika, ichikupa iwe kugona kuseta vatambi mabasa, kubvisa duplicate nziyo, uye kunyange kugadzira chiteshi blacklist.
Ese aya bots atataura uye akawanda akawanda aripo kurodha uye kuisa paDiscord. Imwe neimwe yadzo ichakupa nhevedzano yezvishandiso zvakasiyana-siyana kwete chete pakati nepakati, asi zvakare ichaita kuti chats dzako ive nzvimbo ine simba uye inonakidza.
Pane zvakawanda zvekuwana nezve iyi meseji application, asi izvo zviri kuitika, ita sevha yako ive nyika yakasarudzika nekuigadzirisa neyako yaunofarira bots.
Yakazara nzira kuchinyorwa: HupenyuBytes » Zvirongwa » Best Music Bots for Discord
Ndingaite sei kuti ndidzore mameseji eTeregiramu
File manager; chii, mabasa uye dzimwe nzira